သတင်း - အားသွင်းစက်ရွေးချယ်ရာတွင်သတိထားရန်လိုသည်
CCC သည်“ China Compulsory Product Certification System” ၏အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်ဖြစ်ပြီးမသင်မနေရထုတ်ကုန်အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်နိုင်ငံတွင်အသုံးပြုသောအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ CCC-certified power adapter သည်လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ပါ ၀ င်မှုများအတွက်အမျိုးသားမဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။
သုံးစွဲသူများသည်ဖုန်းဖြေနေစဉ် 3C မှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရသည့်အားသွင်းကြိုးကိုသုံးပါကလျှပ်စစ်ရှော့ခ်ရနိုင်ပြီး၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်၏ဖုန်းအားသွင်းရန် 3C ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလက်မှတ်မရှိသောအားသွင်းကြိုးကိုသုံးပါကအနည်းငယ်သတိလက်လွတ်ခြင်းသည်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ထို့နောက်အားသွင်းစဉ်အတွင်းယိုစိမ့်မှု၊ ဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးမီးလောင်မှုသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်မှုနှင့်မီးလောင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
သင်၏ဘက်ထရီအတွက်မှန်ကန်သောအားသွင်းစက်ကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးသည်။ မှန်ကန်သောအားသွင်းစက်ကမင်းရဲ့ဘက်ထရီကိုတတ်နိုင်သမျှလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်စေလိမ့်မယ်။ အားသွင်းစက်ကိုရွေးချယ်ရာတွင်ကွဲပြားသောအချက်အနည်းငယ်ရှိသည်၊ တစ်ခုစီကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
ဤအရာသည်အရေးကြီးသည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီအားသွင်းစက်အများစုကိုလစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ (သို့) လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ် (LiFePO4) ဘက်ထရီများအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ခြားနားချက်မှာအားသွင်းဗို့အားဖြစ်သည်။ သင်မှန်ကန်သောအားသွင်းဗို့အားရရှိရန်သေချာစေရန်သင့်တော်သော charger အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်သင့်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ပြဿနာသို့ပို့ဆောင်သည်။ သင် VRUZEND ဘက်ထရီတည်ဆောက်ရေးကိရိယာကိုသုံးနေလျှင်ဆဲလ်တစ်ခုလျှင် ၄.၂ V အထိအားသွင်းသင့်သော li-ion ဆဲလ်များကိုသုံးနေသည်မှာသေချာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဘက်ထရီတွင် series အရေအတွက် ၄.၂ V x ရှိသောအားသွင်းအားသွင်းကိရိယာတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဆဲလ် ၁၀ ခုပါသော 10s ဘက်ထရီအတွက်၊ သင် ၄.၂ V x ၁၀ ဆဲလ် = ၄၂.၀ V ကိုထုတ်ပေးသောအားသွင်းကိရိယာတစ်ခုလိုအပ်သည်။
ဆဲလ် ၁၃ ခုပါသော 13s ဘက်ထရီအတွက် ၅၄.၆ V အားသွင်းရန်လိုသည်။
ဆဲလ် ၁၄ လုံးပါသော ၁၄s ဘက်ထရီအတွက် ၅၈.၈ V အားသွင်းရန်လိုအပ်သည်။
နောက် ... ပြီးတော့။
သင်လက်ရှိအားသွင်းခြင်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လည်းလိုသည်။ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းဆဲလ်အများစုကို ၁. ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်တွင်အားမသွင်းသင့်ဘဲအများစုသည် ၀.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်နေရန်ပိုနှစ်သက်သော်လည်း“ စီ” အဆင့်သည်ဘက်ထရီပမာဏသာဖြစ်သည်။ ၃.၅ Ah ဆဲလ်အတွက် ၁ C သည် ၃.၅ A. ၁၀ Ah ဘက်ထရီတစ်လုံးအတွက် 0.5 C သည် ၅ A. ဖြစ်လိမ့်မည်။